Izinyawo eziphansi. Izizathu zalo. Ukuvimbela.
Ukufakelwa phansi yi-deformation yezinyawo. Inyawo evamile linamatshe amabili: longitudinal and transverse. Zidalwa ngamathambo futhi zisekelwa izicubu nemigudu. Izinyawo ezinjengezintambo zenzeka lapho izinsika zonyawo zihlanganiswa. Abantu abaningi babhekisela kulokhu kutholakala kalula. Kodwa empeleni, le nkinga ingakwazi futhi kufanele ixazululwe. Izinyawo ziyisimangalo esiyingqayizivele: sithwale isisindo somzimba wonke, entwasahlobo lapho uhamba futhi ugijima, ungavumeli umthwalo ukusabalala ngaphezulu.
Ngamamitha aphansi, lo mthwalo ufinyelela ezingxenyeni ze-hip, umgogodla kanye nenhloko. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi zitho zithola izinguquko ezimbi. Lapho umgogodla ukhubazekile, ukuhleleka kokuphazamiseka kuphazamiseka, i-scoliosis ivela, bese-ke i-osteochondrosis, amalunga emilenze enza izinguquko.
Ngokuvamile lesi sifo sizizwa sizizwa ubuhlungu nokukhathala okusheshayo kwemilenze ngemva kokuhamba noma okunye ukuzivocavoca. Kusihlwa, izinyawo zingase zivuke kancane futhi zinde. Kungase kube nezinwele ezingenangqondo emva kokuhamba okukhathele noma ukuma eside ezinyaweni zakho. Ngokuhamba kwesikhathi, unyawo luyanda ngobude nobubanzi, amathambo abuhlungu angabonakala, izicathulo ezivamile ziba nzima futhi zingakhululekile. Ukuxilongwa kungafakwa futhi kuningi, kwanele nje ukubuka izicathulo zomuntu: kukhubazekile kakhulu futhi kugqamile ngaphakathi.
Ukufakela phansi kungabangela ukuzalwa, abantu abangaba ngu-3% bathola lesi sifo njengefa. Ngokuvamile, odokotela kumele babhekane nezinyawo ezizungezile.
Isizathu sezinyawo ezincane ezinganeni singaba nezifo eziningana; i-rickets kanye ne-poliomyelitis, imbangela yalesi sifo ingaba izicathulo ezingafanele. Ngokwezibalo zezokwelapha, abesifazane bahlushwa izikhathi eziningana kaningi ngaphezu kwamadoda. Izici zengozi zikhulelwa, ukwedlula ngokweqile, ukuhamba okuphezulu, ukuma ezinyaweni, isifo sikashukela.
Ngokuqala kwe-flatfoot, ungathola ngokugqoka izicathulo nge-insoles ezikhethekile, abaphambili, izinqubo zokubuthwa kanye ne-physiotherapy. Abaphathi basetshenzisiwe basebenziswanga nje kuphela ukwelashwa kwezinyawo eziphansi, kodwa futhi nokuvimbela kwawo. Zonke izicathulo eziphakeme kakhulu, ikakhulukazi zezingane, zinikezwa ngeziqu. Ngokuvamile ukusekela kwe-arch kwenziwa ukwenza i-oda, ngokubonakala komuntu ngamunye. Abaphathi bezinkampani zanele ukugqoka amahora amaningana ngosuku izinyanga ezimbalwa - konke kuxhomeke ekungenikeni kokuphazanyiswa. Udokotela uzokutshela ukuthi udinga izikhungo ezikhethekile zokwelapha. Uma ubuhlungu obukhulu kufanele usebenzise amaphilisi. Kwezinye izimo, lapho ukuguqulwa kwezinyawo kukhulunywa ngokuqinile futhi ukuhamba kuba ukuhlushwa kwangempela, kubalulekile ukuthi usebenzise ukungenelela kokuhlinzwa. Khona-ke odokotela abahlinzayo - ama-orthopedists asusa amanye amathambo enyaweni, abuyisela isimo sakhe esivamile.
Ukuvimbela lesi sifo kufanele kuqale ngisemncane kakhulu. Indima ebalulekile idlala ngokukhethwa kwezicathulo: akumele kube yinkimbinkimbi futhi ingabi nkulu kakhulu, ibe nomuntu onokushintshashintsha kodwa ongeyona yedwa. Ukuqinisa imisipha yezinyawo kukhuthazwa yi-gymnastics nokudlala imidlalo. Ehlobo kuyasiza ukuhamba ngezicathulo esihlabathini nasenhlabathini engalingani. Lokhu kubangela ukucabanga okuvikelayo, ukugwema ukuphakama komlenze futhi kuvimbele ukubukeka noma ukuqhubeka kwe-flatfoot. Kunconywa okugeza okufudumele nsuku zonke emadolweni, ukusikhipha imisipha yonyawo. Ukushisa okulula kulula hhayi kuphela kumnandi, kodwa kuyasiza.
Uma ngokwemvelo uhlale uhamba ngezinyawo zakho, uthenge izicathulo emanzini ashubile futhi athambile. Kwabesifazane abasebenza, izicathulo ezinezinzwane ezivulekile ziyanconywa, ukuze izinyawo ziphefumle kahle, noma ziphezulu ngezindwangu ezimboza amazinyo. Kulesi simo, izithende akufanele zidlule u-4 cm. Ngesikhathi somzuzu wamahhala, udinga ukuphumula lapho uhlezi, uphakamise imilenze yakho ephakeme, wenze izinyathelo eziningana eziyindilinga ngezinyawo zakho ngakwesokudla nangakwesobunxele. Futhi phakathi nosuku odinga ukuma ngaphandle kwezinyawo, ulungisa lesi sikhundla ngamashumi amathathu kuya kwangu-40.
Sekuyisikhathi eside ososayensi bezibuza ukuthi kungani isifo esinjalo njengezinyawo ezinamafutha saqala ukushaya abantu, kuphela ekuthuthukiseni impucuko? Phela, abantu basendulo bahamba ngemilenze emibili, futhi isisindo sabo sasatshalaliswa ngendlela efanayo nabantu abaphila nabo. Noma kunjalo, ubufakazi besayensi bukhombisa ukuthi izinyawo ezincane azizange zikhule ngalezo zinsuku. Manje ukuchazwa kwesimfumbe kutholakala-abadala base behamba bengenazicathulo emhlabathini, utshani, amatshe amancane. Inhlabathi engajulile yanikeza izinyathelo ezingeziwe ezinyaweni, futhi ukungcola okuncane kwendawo kwacasula ama-receptors ezinyaweni, kwasiza ukuqinisa imisipha nemigqa. Indoda yanamuhla iphoqeleka ukuba ifake isembozo phezu kwe-asphalt elukhuni noma ukhonkolo, ongenayo. Yingakho izinyawo ezihamba phansi ziye zaba yinkinga kubantu abahlala emadolobheni.
Isivivinyo sokuveza ngezinyawo eziphansi:
Smear izinyawo zakho nge ukhilimu fat. Beka iphepha elihlanzekile phansi bese uma phezu kwalo. Hlela i-trunk, xhuma imilenze. Ukuvuthwa komzimba kungasatshalaliswa ngokulinganayo. Manje faka umugqa epensela ehlanganisa izingxenyeni zendawo yokulima (ukuqala nokuphela) kwesikhwama sezinyawo, lapho kungekho khona ukuphrinta, kubiza ikholi A, bese uqhathanisa nemingcele yayo ngobukhulu bonyawo. Uma ingxenye engu-A ihlala ngaphezu kwengxenye yonyawo, ulungile, uma isigamu noma ngaphansi, okungukuthi, akukho cavity noma encane, udinga ukubuyela kumathambo omzimba. Lolu hlelo lufanele izingane.
Izifo eziphazamisayo zamathambo we-skeleton
I-myrtle amafutha abalulekile ekuhlosweni kwezokwelapha nezokungcola
Izakhiwo zokuphulukisa nezomlingo we-jet
Kusukela ehlobo kuya ebusika: yini okufanele ugqoke isivuno-phezulu emakhazeni
Ungavimbela kanjani futhi ungalili? Iseluleko sengqondo
Ingulube ibhakakwe ngeziqephu
Umsele wesitayela-2017: izitayela, imibala, imikhiqizo
Izinkomo zenkomo ku-tomato sauce
Usizo lokuqala lokufaka ubuthi ngamakhemikhali asekhaya
Izingcezu ezifakiwe zolimi olwandle oluthile oluthathu oluthile oluthathu oluthile